"Munk" (ich) e izinhlanzi Aquarium. I ikhambi "inkawu" izinhlanzi
Namuhla sifuna ukukhuluma ngani ikhambi "inkawu" izinhlanzi. Empeleni, lesi sifo esivame kakhulu, cishe njalo aquarist nezingozi ngesinye ukumazi nemiphumela yakhe edabukisayo. Ngokwesayensi-ke kubizwa ngokuthi ich. Ukungenwa lesi sifo ngokuphelele zonke izinhlanzi abantu ngothi lwabo. Ngakho-ke, uma uthatha guppies abavamile noma ubuhle ezibizayo ezingavamile, ngenxa yalokho, kungase kudingeke usizo olufanelekile uchwepheshe abanekhono.
Eqinisweni, ikhambi "inkawu" e izinhlanzi lapho, kodwa ngaphambi kokuba sixoxe nabavoti eziyisisekelo amalungiselelo senzelwe inhlanzi aquarium, ngifuna ukutshela ukuthi ukutheleleka kwenzeka. Ingabe okuzivikela lokhu ngokuphelele akekho, ich zingaqoshwa emhlabathini nokudla bukhoma, amanzi ahlanzekile, okuyinto thina njalo wengeza ukuthi aquarium. Ngakho-ke, ikhambi "inkawu" e izinhlanzi Ngaso sonke isikhathi kufanele yakho ekhaya imithi iKhabhinethi. Khona-ke ngeke ulahlekelwe isikhathi esiningi lapho besanda kuqala futhi uzokwazi ukusindisa izwe lakho kancane kwamanzi.
Umthombo ukutheleleka kungenzeka inhlanzi, wathenga esitolo isilwane. Akukho abanezinhloso ezimbi, ngokuphambene abadayisi iwashi ezinhle kakhulu ukuze alondoloze umkhiqizo wawo nokuphila impilo enhle. Nokho, ukucindezeleka sabhekana nalo kulezi ezokuthutha kanye izindawo ibe aquarium entsha, izenze wazizwa. Amasosha omzimba zibuthaka, futhi kungazelelwe uqala afafaze izinhlanzi kanye namabala amhlophe. Lokhu waphinda kuqinisekisa ukuthi ejenti causative lesi sifo isivele ikhona njalo aquarium, nje hhayi zonke izimo ezilungele impilo yayo evamile. Ngakho-ke, iyiphi inhlanzi entsha, kufanele uqale ukuchaza otsadnik ngoba acclimatization bese kuphela utshalwe endlini jikelele. Ngokuqondene iminenke, zingabuye futhi abathwali, okungukuthi, ehlukanisiwe iziqondiso ukusebenzisa ngokugcwele. Izitshalo nomhlabathi kufanele kahle wageza futhi disinfected. Kuhle kakhulu, uma pre-cwilisa nabo isixazululo magciwane. Ngakho-ke, ikhambi "inkawu" e izinhlanzi kufanele isetshenziswe njengesibonelo prophylactic.
Ngokuvamile izimpawu zokuqala zesifo kuvetwa hhayi eningi kakhulu. Izakhamuzi aquarium namanje kumnandi ukubhukuda sondle ngenkuthalo, kodwa imizimba yawo zikhona izindawo eziningana noma izilongotshane. Vele kudingeka ukuthola ukuthi noma hhayi isifo "Ukukhanya Okuholela" izinhlanzi. Ukwelashwa zingase zishintshe kakhulu uma sikhuluma ezinye izifo ezibangelwa amagciwane noma fungal. Yingakho udinga ukuqonda kahle ukuthi lesi sifo wena usebenzelana. Lokhu kungaba umbandamu, okuyilona elisebenzayo futhi libhekene namabala amhlophe phezu komzimba. Nokho, kancane kancane, they jikisa ibe enamathela Fluffy. Esinye isifo esibi, lepidortoz Ungase futhi ngokusobala sifane. Ungakwazi ukugcina kanjani isikhumba kwakhiwa amabhamuza egcwele uketshezi. Lymphocytosis kuzibonakalisa njengoba Izigaxana elimhlophe elincane noma amapuleti, okuyinto kancane kancane. nezinye izifo eziningi futhi kuholele ukubukeka izilongotshane elimhlophe esikhumbeni, ngakho ungase udinge usizo aquarist abanolwazi ukwenza siphetho.
Inqubo okufanele kwenziwe ngesikhathi lapho izinhlanzi kwaba abathile ababenemithwalo uhlevane ekuseni, efana "semolina", noma ngisho kancane ezincane. Kulokhu, uma umzimba izinhlanzi ifinyelele inani eziyishumi noma ngaphezulu, isilwane ikhambi kuyoba nzima kakhulu, uma kungukuthi akwenzeki. Kumele kukhunjulwe ukuthi amandla okumelana nemithi ehlukahlukene, kanye umjikelezo ukuphila ngokwako kungase kuhluke Ichthyophthirius ezahlukene. Yebo, ngempela emndenini omkhulu, futhi ilunga ngalinye angadala izinkinga enkulu aquarium yakho.
Ciliates, okuvame ukuhlotshiswa ngayo Ezindaweni zethu, kakhulu "ngokuthula." Banda kunalokho kancane baze ngisho babulawe ngokumane ukhulisa izinga lokushisa kwamanzi kuya degree 32. Kalula wabhubhisa cishe kunoma iyiphi izidakamizwa. Uhlobo lwesibili amazwe esuka eSouth America. efanayo Lokhu abameleli elula mnene, abavame ukuza nathi ubuhle cichlids. It ukuqedwa kalula kakhulu ngosizo izidakamizwa ezikhethekile, kodwa ukwanda izinga lokushisa lamanzi akesabi. Uhlobo lwesithathu amazwe ezihlala emanzini angenawo usawoti yaseNingizimu-mpumalanga Asia. Izimuncagazi yalolu hlobo kukhona elikhulu kakhulu futhi kuyingozi ukwedlula zonke izingane odlule. Salting amanzi, "Furatsilinom", "Bitsillin-5" - konke lokhu amathuluzi ngokuphelele engenamsebenzi ekulweni kwabo. Ekugcineni, ifomu lesine futhi odabuka Asian, kodwa landile izinhlanzi ezihlala emanzini brackish. Yingakho singahlangabezana ngezinye izikhathi ezinye zazo ziyangqubuzana ulwazi. Abanye baphikisa ngokuthi lesi sifo kalula belashwa ngokuvusa lokushisa lamanzi, abanye batusa ukuba wena kuphela ukusebenzisa izidakamizwa ezinamandla.
Ngakho, ake sibheke izindlela kuqala ngawo namuhla avame aphathwe isifo "Ukukhanya Okuholela" izinhlanzi. Ukwelapha iphephile ngempela, futhi kungani eye wathola ukwethenjwa aquarists iminyaka eminingi. Lokhu udayi organic, awusebenzi ziphazamisa filtration begazi amanzi, kungaba ukungezwa ngqo endlini evamile izinhlanzi. Kuthiwa udayi cishe hhayi ukulimaza izitshalo. Ubuningi elilungile ubhekwa 0,09 mg / l. Kulokhu, khumbula ukuthi le lokuhlushwa kuyinto ngokweqile kwabanye izinhlanzi. Lokhu eyikati ushaka futhi Labe, Botia, ngoba ingqondo akumele kube ngaphezu kuka 0.04 mg / l. Nokho, kulesi simo ukuphumelela ukwelashwa incipha ngokucijile. Ngokusho oyiphawulile okugcinwa, ngisho nezinhlanzi ibuthaka ngokuvamile baphathe lokuhlushwa 0,06 mg / l. "Munk" - izinhlanzi isifo ukukhanya okwanele ngokuya ukuxilongwa kanye nokwelashwa, kungabonwa ngeso lenyama nezidakamizwa yaphathwa amanzi can saqala ngamunye.
Ngakho, oluhlaza Malachite sengezwe ukudicilela nsuku zonke. Lokhu kumele kwenziwe kuze kube yilesi sikhathi, kuze kungabi khona izimpawu ezikhungathekisayo zalesi sifo. Ngemva kwale kwelashwa kwanele ukunweba ezinye izinsuku ezimbili. Ngaphambi kokunezela oluhlaza Malachite kuyadingeka ukuze esikhundleni 25% wamanzi, futhi kokunezela kulo 5 amathonsi iodine 100 amalitha, kuzokhuphula ukuphumelela ukwelashwa abaningi izikhathi. Kuyadingeka ukuba silondoloze lokushisa lamanzi degrees okungenani 26 futhi ukukhubaza isihlungi. Ngemva Inkambo yokwelashwa kuyadingeka ukushintsha ngokuphelele emanzini, ugeze inhlabathi, nakuba aquarists abanolwazi belulekwa umane ukufakela izinhlanzi phakathi ukwelashwa kwelinye isitsha, futhi aquarium main ukuze kukhushulwe izinga lokushisa degrees 32. Njengoba infusoria ngokushesha aphume izibungu futhi, behluleka ukuthola bona izinhlanzi uzofa. Njengoba ubona, "Ukukhanya Okuholela" - isifo izinhlanzi okuyinto ingelapheka lula, kudingeka nje ukuzohlola ngokucophelela abakhileyo aquarium nsuku zonke.
"Antiparah" - ikhambi "decoys"
Namuhla-ke liyini ikhambi ephumelela kunazo ngokumelene ezihlukahlukene izifo, ngalo ungathola ukwazi uma kuyoba ikhaya aquarium. Ukulungiswa possesses antiparasitic, elwa namagciwane kanye isinyathelo antifungal. Isetshenziselwa ukwelapha ngempumelelo zezinhlanzi ich, izifo ezibangelwa amagciwane yesibili, kanye nezinhlobonhlobo zezinye izifo. The main izidakamizwa esebenzayo - oluhlaza Malachite futhi formalin. Yingakho uketshezi has a nephunga ethize kanye oluluhlaza.
Kuyinto ikhambi "inkawu" izinhlanzi ethengiswe kunekhambi ketshezi. isenzo sayo sisekelwe yokuthi amagciwane athile kanye nesikhunta, lenyama kanye helminths parasitizing ku die inhlanzi, njengoba izithako main asebenzayo zomuthi ukuphazamisa ngokuphelele umzimba wabo. Kulokhu, lesi sidakamizwa isheshisa ukuphulukiswa isikhumba ezilimele. Kuyinto ngokulinganisela izinto eziyingozi esesikhundleni ubuthi ongaphakeme bayodoba. Kulokhu, sebenzisa nezinhlobo ezihlukene zokwelashwa. Ukuze ingasetshenziswa nokuvimbela yesikhashana, namabhati eyadonsa amahora amathathu, lapho isilinganiso amanzi izidakamizwa - 1 ml ngayinye 10 amalitha. Indlela efanayo isetshenziswa ekwelapheni, kuphela ngalesisikhathi, ingasi kanye kodwana okungenani kabili ngesikhathi esingaba usuku olulodwa.
Isikhathi yokwelapha kanye nokubuyekeza
Ngokuqinisekile unesithakazelo kangakanani iphathwa "Ukukhanya Okuholela" izinhlanzi. Lokhu incike kundlela okuyinto usebhekene ukutheleleka, kanye esigabeni lapho isifo manje. zokugeza Long kungadingeka uma abakhileyo aquarium yakho futhi ebucayi emuthini futhi awukwazi ukumelana ayanda lokuhlushwa yayo. Kulokhu, 1 ml 50 amalitha amanzi. Ubude besikhathi sokwelashwa zingaba phakathi 3 kuya kwezingu-8 izinsuku. Lona ikhambi kangcono "semolina" namuhla, ngenkathi ezingabizi kakhulu.
izidakamizwa isiJalimane, okuyinto esetshenziswa inqwaba aquarists okhokhelwayo. It is zihlukaniswa ukugeleza izinga elincane, 50 ml emaphaketheni eyenzelwe 800 amalitha amanzi. Kulokhu, izindleko - ruble 400 kuphela. Lona ikhambi "decoys" izinhlanzi ezahlukene kahle ikubekezelele iyiphi abakhileyo kwamanzi. Ukwakheka oluhlaza Malachite nesixazululo formaldehyde futhi amanzi distilled. Ithuluzi ingasetshenziswa ehlukanisiwe inhlanzi entsha. Kulokhu, udinga ukwengeza 3-4 lehla 25 amalitha amanzi bese uyeke Cubs izinsuku ezimbalwa. Isetshenziswa yokwelapha zonke izinhlanzi angenasawoti, kodwa ulwelwe ezingenamgogodla kaningi awukwazi ukubekezelela. Lapho kuvela izimpawu zokuqala yesifo ufuna ukwengeza 1 ml ngayinye 40 amalitha amanzi. Ngosuku lwesithathu inqubo kumele okuphindaphindiwe. Emacaleni angu-olunzima, yokwelashwa ingatholakala okuphindaphindiwe 5 futhi ezingu-7. Phakathi ukwelashwa, udinga ukuvala filtration amanzi bese andise aeration.
Lona omunye owaziwa kumibuthano professional aquarists umuthi izinhlanzi "decoys." "Tetra" - ithuluzi kuhlangene, okuyinto senzelwe ekwelapheni izinhlanzi Aquarium yizifo ezihlukahlukene, phakathi lapho kukhona ich. Umuthi obulala hhayi kuphela zonke izimuncagazi, kodwa futhi ahlanze ngempumelelo aquarium, kuyilapho nawe ungalushayi kokuphazamisa ibhalansi yemvelo. Kuyamangaza ukuthi kungathatha isikhathi eside ukuthola ukwelashwa. Zingakapheli izinsuku ezine, uzobona ukuba ngcono okukhulu, bese kuthi umuntu alulame ngokugcwele. Njengoba kwemvelo e aquarium buyobuyiselwa. Phakathi ukwelashwa okudingekayo ukuthuthukisa aeration uphinde ukhubaze ngokuphelele zokuhlunga. Ukukhanyisa kungaba yini, ke akuphazamisi ukusebenza kahle.
Uma aquarist saqala, indlela elula iwukuba uqale ukwelashwa nale izidakamizwa. Akukona nje kuphela ukuthi kakhulu esebenza kahle, kodwa futhi lubhekwe anele emhlabeni ngaphansi kwamanzi lonke. Nge umthamo kwesokudla sidakamizwa sisiza ukulondoloza bonke abakhileyo, kuhlanganise gazinga ababuthakathaka kakhulu.
Siyaqhubeka cabanga amalungiselelo kusukela "decoys." Futhi olandelayo sizokwenza "ukwenza Lago". It okuthengiswa ekhemisi njalo futhi eziningi eziwusizo phezu izidakamizwa ezikhethekile. Okokuqala kufanele kuphawulwe ukuthi idluliswe ukudoba kahle. Ngisho sizwele ukuba imiphumela emibi yokwelashwa ngamakhemikhali neon bawuthwale kalula ngokwanele. Ukuphumelela kule izidakamizwa akuphazamisi nobulukhuni amanzi libhujiswa kuthatha kade kakhulu, futhi enze kube nokwenzeka ngaphansi kwazo zonke izimo zokukhanya. Ngesikhathi esifanayo izidakamizwa ayiphuli ilungelo biobalance, futhi ngaphambi kabusha ethula ke akudingekile ukuba benze izinguquko amanzi. Tablets kusukela "decoys" e izinhlanzi ngokuvamile musa abangele imiphumela emibi. Kukhona yokuntula ekwelapheni lesi izidakamizwa e izinhlanzi okungenzeka aqala ukuwohloka amaphiko, kanye esesuthi encishisiwe, kuze ukwenqaba okuphakelayo. Kodwa uma emuva ngoLwesithathu evamile, konke kuyoba ukubuyela esimweni esivamile.
Uma usuqale imithi yesifo endaweni yokuqala kwi umzimba izinhlanzi, kwanele ukuba abaphathi eyodwa izidakamizwa futhi ushintshe amanzi ezinsukwini ezimbili. Uma lesi sifo iye kwadingeka isikhathi uthuthuka, uzodinga babe ezimbili ekwakhiweni izinsuku ezine. Isikali - 1 iphilisi ngalinye 40 amalitha amanzi.
Iphinde labawatfolile esifundvweni nobe ekhemisi njalo. Umuthi kuyinto inkampani futhi zingaba kahle njengekhambi lokwelapha izinhlanzi "decoys" kusaqalwa ngakho. Kuvuselela omzimba izidalwa zasemanzini igcwalisa ukuntula iodine amanzi. Ngaphezu kwalokho, kunomphumela omnene isinqandakuvunda. Lesi sidakamizwa kunomphumela omuhle yonke indawo, ngcono isimo izitshalo ngenxa potassium ezikuyo. ewusizo kakhulu ngesikhathi zidala, amaqanda buzoba buncane ukungenwa ukuhlaselwa ukukhunta.
Amalungiselelo kusuka kits yethu
Ezinye aquarists ukwelapha "decoys" inhlanzi ikakhulukazi ungathengi bese usebenzisa lokho isivele isandla. It antibiotic ezinye izidakamizwa. Endaweni yokuqala lesi sidakamizwa "furazolidone". It isetshenziswa Ingxenye 1 iphilisi ngalinye 10 amalitha amanzi. Kuyinto ejenti elwa namagciwane ukuthi uyakwazi ukusiza ekulweni infusoria. Ukwelashwa kufanele kuqhutshwe aze ukunyamalala ephelele izimpawu.
Isikhathi esining impela, ukuxazulula le nkinga futhi wasebenzisa i-antibiotic penitsillovogo uchungechunge ngokuthi "Bitsillin-5." Kuyinto ezibanzi spectrum ngemithi elwa namagciwane, okuyinto kudedela izinhlanzi Amagciwane kanye kuqinisekisa yokutakula. Nokho, kulesi simo, izibungu, okuyinto ngesikhathi sokwelashwa amanga phansi, bahlale bephila, okusho ukuthi maduze ungalindela kubheduke entsha. Kumele kukhunjulwe ukuthi yimaphi ama-antibiotic kunciphisa kakhulu amasosha omzimba. Okungukuthi, leli thuluzi kumele yakhetha kwenzeka ukuthi ayikho indlela ukuze uthole izidakamizwa ngempumelelo ngaphezulu.
Salt okugeza futhi kuyanda lokushisa lamanzi
Izindlela endala yokusebenzelana nalesi sifo. Eqinisweni oqinisekisa ukuthi thina ngeke ukusiza, cha, kodwa uma ubona izimpawu zokuqala isifo abasafufusa hhayi kakhulu uyalwazisa nezilwane abazifuyile, noma okuphambene nalokho, ithangi lakho izinhlanzi eyigugu kakhulu, okuyinto futhi namanje kakhulu sensitive nokwelashwa ngamakhemikhali, le ungazama abasindise ngale ndlela. Ngokuyinhloko lokushisa kwamanzi kufanele lenyuka ngemazinga 30. Kulokhu, izinhlanzi kungenziwa imali ku ngokuhlukaniswa ngamanzi anosawoti, ikakhulukazi uma uhlala abameleli abangathandi okushisa aphezulu ngokweqile. Salt amanzi kusho lokuhlushwa 1 isipuni ngalinye 10 amalitha amanzi. Kulokhu, uma izinhlanzi ecindezeleke, idabukile, amanzi kumele lasuswa futhi kwafakwa ngengxenye yesithathu ke enetheni.
Izidakamizwa engasetshenziswa ukwelapha "semolina", impela eningi. Ukuze ukhethe elilodwa ukuthi kuyavumelana ngempela, kufanele inake izici of izilwane futhi isinyathelo ekuthuthukiseni lesi sifo. Ukwelapha ngaphambili iqala, kancane imizamo, isikhathi, futhi ufake umfutho owengeziwe idinga. Ngakho musa ukuchitha isikhathi sakho. hobbyists abanolwazi kungukuthi belulekwa iphendukele amakhambi ekhaya nosawoti enjalo noma izidakamizwa ezivamile ezenza imithi. Abazincomayo ukuthenga imikhiqizo professional kanye ukuzisebenzisa ngokuhambisana ngokuqinile imiyalelo kanye neziphakamiso ochwepheshe. Lapha kulapho uthola yi omkhulu, okungukuthi, babuyele ngokugcwele izinhlanzi ngaphandle kwemiphumela eziphathekayo ngoba aquarium. Nokho, ngezinye izikhathi, kufanele afake ukuphila kwawo engozini shellfish, njengoba awukwazi ukubekezelela izidakamizwa kakhulu kusukela "decoys." Nokho, azishiye ngaphandle kokwelashwa, unikeza ithuba infusoria futhi ukuzalela aquarium yakho, ngasinda kwesikhathi okungekuhle for iminenke shelled. Ngakho Ngokuhlukaniswa otsazhivayut ezingenamgogodla, benze okungenani lokuhlushwa ikhambi futhi zigcinwe khona okungenani ngesonto. Kungaleso sikhathi kuphela lapho uqale ethangini ngayo.
"Azinoks Plus" ngoba izinja: imfundo manual, ukubuyekezwa
Toxoplasmosis ezinjeni: izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela
Upholi waseSenegal - engumngane engcono
Inja zohlobo Akita Inu - ingcebo kazwelonke of Japan
Ummese "Skinner": Izici kanye nokubuyekeza
Nail Clippers: izinhlobo nokusetshenziswa
Kovalenko Aleksandr: Biography umdlali Ukrainian